Germalka: Qaxooti la Musaafurin lahaa oo laga soo horjeestay, iyo Dibadbax ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Berlin Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaGermalka: Qaxooti la Musaafurin lahaa oo laga soo horjeestay, iyo Dibadbax ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Berlin
April 12, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Caalamka 0
Qaxooti la musaafurin lahaa kuna siijeeda Afghanistan ayaa ka dhashay muran xoogan muranka ayaa ku aadan sababo la xiriira xaaladda nabadgelyo ee ka jirta halkaas.
Dibadbaxayaasha ayaa isugu soo baxay garoonka diyaaradaha ee Berlin Terminal 5 goor dambe oo Arbacada lasoo dhaafay ah si ay uga hadlaan duulimaad masaafurin ah oo halkaasi ka jiray kuna sii jeeday Afghanistan fiidnimadii. Qiyaastii 350 qof ayaa isugu soo baxay mudaaharaadka, taas oo ka badan qiyaasta 50 ilaa 75 qof.
Dibadbaxayaasha ayaa watay astaamo ay ugu baaqayaan maamulka inay joojiyaan duulimaadka masaafurinta, iyadoo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay xireen waddooyinka gala garoonka. Dibadbaxyada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Golaha Qaxootiga ee Brandenburg waxayna dhamaadeen kadib markii diyaaradii waday dakaasi ay u baxday dalka Afghanistan.
Labaatan nin oo reer Afgaanistaan ​​ah ayaa markii dambe yimid Kabul iyagoo wata diyaaradda Jarmalka subaxnimadii Khamiista. Waa duulimaadkii 38-aad ee loo musaafuriyo dalka Afghanistan tan iyo bishii Diseembar 2016 markii ay siyaasaddu bilaabatay, iyadoo wadar ahaan 1,035 Afgaanistaan ​​loo diiday magangalyo-doon dib loo celiyay.